LafargeHolcim က ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်သမက်၊ချွေးမတို့နှင့် ဆက်စပ်ခဲ့သော ကုမ္ပဏီများ၊ ဦးပိုင်မိတ်ဖက်များနှင့် ပူးပေါင်းမှု ဖျက်သိမ်း - ရန်ကုန်ခေတ်သစ် မီဒီယာ
July 27, 2020 53
နိုင်ငံတကာတွင် ဘိလပ်မြေနှင့် ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းသုံး ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်သည့် ကမ္ဘာ့ အကြီးဆုံး LafargeHolcim ကုမ္ပဏီက ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်၏သမက်နှင့်ချွေးမဖြစ်သူတို့နှင့် ဆက်စပ်သော စီးပွားရေးကုမ္ပဏီများ၊ တပ်မတော်ပိုင် ဦးပိုင်ကုမ္ပဏီ၏ မိတ်ဖက် ကုမ္ပဏီများနှင့် စီးပွားရေးပူးပေါင်းမှုကို စာရင်းရှင် ဖျက်သိမ်းလိုက်ကြောင်း ဇူလိုင်လ ၂၆ ရက်နေ့ ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်သည်။
Justice For Myanmar အဖွဲ့က LafargeHolcim ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် ၎င်းတို့၏ မြန်မာနိုင်ငံရှိ စီးပွားရေးကို စာရင်းရှင် ဖျက်သိမ်းလိုက်ကြောင်း ကြေညာမှု အပေါ် ကြိုဆိုလိုက်ပြီး LarfargeHolcim အနေဖြင့် မြန်မာ့စီးပွားရေးမိတ်ဖက်များဖြစ်ကြသည့် ဦးပိုင်ဆက်စပ်ကုမ္ပဏီများ၊ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်နှင့် ဆက်စပ်သော လုပ်ငန်းများထံ ရောင်းချရန် စီစဉ်ထားသည့် အရောင်းအဝယ်တစ်ရပ်ကို ယခုကဲ့သို့ ရပ်ဆိုင်းလိုက်ခြင်းသည် မြန်မာစစ်တပ်အတွက် အနာဂတ်ဝင်ငွေစီးဆင်းမှုကို ငြင်းပယ်လိုက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ထုတ်ပြန်ပြောဆိုသည်။
ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံအခြေစိုက် LarfargeHolcim ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် စစ်တပ်ပိုင် ဦးပိုင် ကုမ္ပဏီ၊ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်နှင့် ဆက်နွယ်နေသော M.Y. Holding နှင့် Aung Myin Thu Group (အောင်မြင်သူ လုပ်ငန်းစုကုမ္ပဏီ)တို့နှင့် ဖက်စပ်လုပ်ငန်း တစ်ရပ် ဖွင့်လှစ်ခဲ့ကြောင်း ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
LafargeHolcim နှင့် စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သည့် M.Y. Holding ၏ ဦးဆောင်သူသည် ဦးရဲမြင့်ဖြစ်ပြီး ဦးရဲမြင့်သည် စစ်တပ်ပိုင် ဦးပိုင်ကုမ္ပဏီ၏ ဘိလပ်မြေထုတ်လုပ်သော ဆင်မင်းကုမ္ပဏီတွင် ဘုတ်အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ကြောင်း၊ LafargeHolcim နှင့် စီးပွားရေး မိတ်ဖက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးနောက် ဦးရဲမြင့်သည် ဆင်မင်းကုမ္ပဏီ၏ ဘုတ်အဖွဲ့မှ နုတ်ထွက်ခဲ့ကြောင်း၊ သို့ရာတွင် M.Y. Holding သည် ဆင်မင်းကုမ္ပဏီထုတ်ကုန်များကို ကုန်သွယ်မှုများ လုပ်ကိုင်လျက်ရှိကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။
LafargeHolcim နှင့် စီးပွားရေးဖက်စပ်လုပ်ငန်းထူထောင်ခဲ့သည့် အောင်မြင်သူကုမ္ပဏီကို စစ်တပ်ပိုင် ဦးပိုင်၏ ဆင်မင်းကုမ္ပဏီမှ လက်ရှိ ဘုတ်အဖွဲ့ဝင် ဦးစောငြိမ်းက တည်ထောင်ထားကြောင်း၊ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်မိသားစုနှင့် နီးကပ်သည့် ဆက်နွယ်မှု ရှိကြောင်း၊ အောင်မြင်သူကုမ္ပဏီ၏ ကုမ္ပဏီခွဲ နှစ်ခုတွင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်၏ သမက်ဖြစ်သူနှင့် ချွေးမဖြစ်သူတို့က ဒါရိုက်တာနှင့် ရှယ်ယာရှင်များ ဖြစ်ခဲ့ကြောင်း Justice for Myanmar အဖွဲ့၏ ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်၏ ချွေးမဖြစ်သူ မမျိုးရတနာထိုက်သည် အောင်မြင်သူကုမ္ပဏီ၏ ကုမ္ပဏီခွဲဖြစ်သော Apower ကုမ္ပဏီတွင် ရှယ်ယာရှင်နှင့် ဒါရိုက်တာတစ်ဦးဖြစ်ခဲ့ပြီး ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်၏ သမက်ဖြစ်သူ မောင်လင်းမြင့်ဖွေးသည် အောင်မြင်သူကုမ္ပဏီ၏ ကုမ္ပဏီခွဲဖြစ်သော Minn Pyae Tagon Industrial ကုမ္ပဏီတွင် ရှယ်ယာရှင်နှင့် ဒါရိုက်တာဖြစ်ခဲ့ကြောင်း၊ ၂၀၁၇ ခုနှစ် ကုလသမဂ္ဂအချက်အလက်ရှာဖွေရေးမစ်ရှင်၏ အစီရင်ခံစာတွင် အောင်မြင်သူကုမ္ပဏီအနေဖြင့် ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးများအပေါ် လူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်မှုကို ထောက်ပံ့ကူညီရန် မြန်မာတပ်မတော်သို့ သိန်း ၆၀၀ တန်ဖိုးရှိသည့် လှူဒါန်းမှု နှစ်ကြိမ် လုပ်ဆောင်ခဲ့ဟု ဖော်ပြခဲ့ပြီးနောက်မှ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်၏ သမက်နှင့် ချွေးမဖြစ်သူတို့သည် အောင်မြင်သူကုမ္ပဏီများ၏ ဘုတ်အဖွဲ့မှ ဖယ်ရှားခဲ့ကြောင်း Justice for Myanmar အဖွဲ့က ထုတ်ပြန်ပြောဆိုထားသည်။
“LafargeHolcim ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကို Justice for Myanmar က ကြိုဆိုပါတယ်။ ဘိလပ်မြေလုပ်ငန်းက မြန်မာစစ်တပ်အတွက် အဓိက ဝင်ငွေလမ်းကြောင်း တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဝင်ငွေတွေက မြန်မာစစ်တပ်အတွက် ဆိုးရွားတဲ့ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေကို အရေးယူခံရခြင်းမရှိဘဲ ကျူးလွန်နိုင်စေတာဖြစ်ပြီး အများပိုင်ပ စ္စည်း ဝယ်ယူရေးလုပ်ငန်းတွေမှာ အကျင့်ပျက်ခြစားတာတွေ၊ ပြည်သူပိုင်ပစ္စည်း ခိုးယူတာတွေကနေ စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေနဲ့ ခရိုနီတွေ ကြွယ်ဝချမ်းသာအောင်လုပ်ရာမှာ ကူညီထောက်ပံ့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်” ဟု Justice for Myanmar အဖွဲ့၏ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ရတနာမောင်က ပြောဆိုထားသည်။
၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် ကုလသမဂ္ဂအချက်အလက်ရှာဖွေရေး မစ်ရှင်က LafargeHolcim ကို စစ်တပ်ပိုင် ဦးပိုင်၊ မြန်မာ့စီးပွားရေးကော်ပိုရေးရှင်းတို့နှင့် ပဋိဉာဏ်ဆက်နွယ်မှုများ၊ စီးပွားရေးဆိုင်ရာ ဆက်နွယ်မှုများ ရှိသည့် နိုင်ငံခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအဖြစ် အမည်စာရင်း သတ်မှတ်ခဲ့ပြီး မြန်မာစစ်တပ်နှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအားလုံး ဆက်နွယ်မှု ဖြတ်တောက်ရန် တောင်းဆိုခဲ့သည်။
Justice for Myanmar အဖွဲ့၏ ထုတ်ပြန်ချက်နှင့်ပတ်သက်ပြီး တပ်မတော်၏ သဘောထားမှတ်ချက်ရယူရန် တပ်မတော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ထံ ရန်ကုန်ခေတ်သစ်သတင်းဌာနက ဆက်သွယ်မေးမြန်းရန် ကြိုးစားလျက်ရှိသည်။
ဓာတ်ပုံ- ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် ထိုင်းနိုင်ငံသွားရောက် လည်ပတ်ခဲ့သည့် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်နှင့်ဇနီး၊ မြန်မာ့တပ်မတော်ဗိုလ်ချုပ်များ။
Photo Credit- ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်website
KNU မှ နုတ်ထွက်ပြီး ပန်းတနော် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအဖြစ် ရွေးကောက်ပွဲဝင်မည့် ပဒို မန်းငြိမ်းမောင်